नायिकामाथि सेक्सुअल ह्यारिसमेन्ट, निर्देशक निकाल्नुको खुल्यो रहस्य (गसिप भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
नायिकामाथि सेक्सुअल ह्यारिसमेन्ट, निर्देशक निकाल्नुको खुल्यो रहस्य (गसिप भिडियो)
फिल्मी फण्डा । गत केहीहप्ता अगाडी चलचित्र लाउरेबाट एकासी निर्देशक निगम श्रेष्ठलाई निकालियो । निगम श्रेष्ठले पनि चलचित्रमाथि कुनै अधिकार जमाएन र कानुनी प्रक्रियामा पनि लागेन । निगममा मिडियामा पनि आएन । खास कारण के थियो उनलाई चलचित्रबाट निकालियो ? सबैको मनमा यहि प्रश्नले स्थान पाईरहे । पछि चलचित्रका टिमले प्राविधिक कारणले निर्देशक निगमलाई निकालिएको खबर आयो तर त्यो खबर केही हप्ता पनि सत्य रुपमा टिक्न सकेन ।
निर्देशक निगम श्रेष्ठलाई फिल्मबाट निकाल्नुको सत्यता अर्कै कारण रहेछ, फिल्म भित्रको किचलो । फिल्ममा किचलो भने निर्देशक निगम श्रेष्ठ स्वयंमले निकालेका रहेछन् । फिल्ममा दुई नायिका थिईन् सृष्टि श्रेष्ठ र मिरुना मगर । हामीले निर्माता सुनिल रावललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा निर्देशक निकाल्नुको कारण प्राविधिक मात्र भएको दावी गरे । हामीले फेरी सोध्यौं त्यो प्राविधिक के हो ? तर उनले केही बोल्न चाहेनन् फेरी प्राविधिक समस्या हो केही हैन भने । त्यसपछि निस्की सकेका निर्देशक निगम श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्न खोजे शुरुमा फोन उठाए र पछि त्यो विषयमा बुझ्न खोज्दा फोन काटिए र पछि मोबाईल अफ भयो । उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
बास्तविक कुरा के हो भने निर्देशक निगम श्रेष्ठले सुटिङ समयमा नायिकामाथि सेक्सुअल ह्यारिसमेन्ट गर्न खोज्दा फिल्ममा किचलो भएको रहेछ । नाम नखुलाउने शर्तमा फिल्म युनिट भित्रका एकले हामीलाई घटनाको जानकारी खुलाउँदै भने–निर्देशकले नायिकालाई जबर्जस्ती गर्न खोजियो पछि सुटिङमा हल्ला फैलियो । नायिकाले फिल्म छोड्छु भन्दा पछि निर्देशक नै निकालिएका हुन् । हामीले यस विषयमा नायिकालाई सम्पर्क गर्न खोज्यौं तर उनी सम्पर्कमा आईनन् र सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा केही बोल्न चाहिनन् । केही दिन पछि सम्पर्क भयो । हामीले उनलाई त्यहि प्रश्न दोहो¥यायौं निर्देशकले तपाईलाई सेक्सुअल ह्यासिरमेन्ट गर्न खोजेको हो या तपाईमाथि जबर्जस्ती भयो ? उनले भने– म यो विषयमा बोल्न चाहिन । म केही बोल्न सक्दिन म सँग बोल्न कुनै शब्द छैन प्रोडक्शनसँग कुरा गर्नु भन्दै उनी पन्छिईन् । हामीले फेरी अनुरोध गरेऊ खास के हो त घटनाको वारेमा जानकारी त गराउँनुस् । उनले भने मलाई यसमा बोल्नै मन छैन । प्रोडक्शनलाई सोध्नुस् भने ।
हामीले फिल्मका प्रोडक्शन म्यानेजर बुद्धिलाल मगरलाई सम्पर्क ग¥यौं । उनले निर्देशक निगमलाई ननिकालिएको दावी गरे । पहिलेकै शर्तमा काठमाडौं बाहिरको छायांकन आफुले नगर्ने निगमको सहमति थियो र ऊ आफैले छोडेको हो –बुद्धिले भने । नायिका र निर्देशक बिचको कुरा आफुलाई थाहा नभएको र त्यस विषयमा बोल्ने अधिकार पनि नभएको बताए । उनले निर्माता निर्देशक बिच के कस्तो सम्झौता भयो आफुलाई थाहा नभएको बताए । वास्तवमा फिल्म लाउरेको सुटिङमा निर्देशक निगम श्रेष्ठले नायिका मिरुना मगरलाई हातपात गरेको रहेछ । सुटिङ समयमा निगमले मिरुनालाई सेक्सुअल ह्यारिसमेन्ट गर्न खोज्दा मिरुनाले प्रतिकार गरिन् र पछि मिरुनाले फिल्म नगर्ने कुरा भयो । यो कुरा फिल्म युनिट भित्र सिमित राखियो र निर्मातालाई समस्याको वारेमा जानकारी गराईयो ।
निर्माताले छायांकन भईसकेको फिल्मबाट नायिका निस्केपछि समस्या हुन्छ भनेर निर्देशक निगम श्रेष्ठलाई निकालियो । नायिका मिरुनाले घटनाको वारेमा आफ्ना आमालाई जानकारी गराईन् । उनकी आमाले छोरी माथि यस्तो घटना भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर निगम श्रेष्ठको वारेमा मिडियालाई जानकारी गराउने बाटो तय गरिन । पछि त्यै कुरा चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राज कुमार राईको मा पुग्यो । राज कुमार राईले मिरुनालाई नजिकबाट नचिनिएता पनि मिरुनाको आमा भने राज कुमार राईको साईनो पर्ने आफन्त रहिछिन् । अनि थाहा भयो राज कुमार राईलाई मिरुना आफ्नै आफन्त रहिछिन् भनेर । उनले मिरुनाको परिवारलाई सम्झाउन लागे । यसो गर्दा हाम्रो छोरीको बेइज्जत हुन्छ यसो नगरौं भनेर सम्झाए । पछि खबर बाहिरिएन । निर्माता सुनिल रावल र निर्देशक निगमलाई राईले बोलाएर कुरा गरे । निगमले पछि चलचित्रमा कुनै दावी विरोध गर्न नपाईने कागज गरेर सुनिल रावले एक लाख रुपैयाँ दिएर निगमलाई फिल्मबाट निकालिदिए ।
नायिका मिरुनाको केही दोष छैन बरु उनले पछि कुनै नव प्रवेशी कलाकार माथि हुने सक्ने समस्यासँग लडिन् र निधर भईन् भने बुझिन्छ । शुरुमा निर्माता माधव वाग्लले फिल्म लालपुर्जा खेलाउन इन्ग्ल्याण्डबाट मिरुनालाई बोलाईएको थियो । र पछि उनी फिल्म लाउरेमा पनि सहभागी भएकी थिईन् । निर्देशक निगम श्रेष्ठ सफल चलचित्र लुटका सहायक निर्देशक थिए । त्यसपछि उनले फिल्म छड्के निर्देशन गरे । अहिले लाउरेमा निर्देशन गर्दै गर्दा यस्तो घटना घटेपछि उनलाई निकालिएको हो । उनले जानी जानी नायिकामाथि त्यस्तो दुव्र्यहार गरेका हुन् या मदिराको लतमा । गलत भने पक्कै गरेकै हुन् । भोलीका दिनमा यस्तो घटना फेरी नदोहोरियोस् भने हाम्रो चाहना हो । हाल लाउरेको छायांकन धरानमा भईरहेको छ ।